RINDRIM-BATO NIANJERA : Eny amin’ny La voirie no nametrahana ireo olona nesorina amin’ny tranony
Trano miisa sivy, onenan’ny fianakaviana miisa 30 no tsy maintsy narodana ny talata teo. 6 décembre 2018
Ny kaominina no nanampy azy ireo nitatitra ny entany sy nandrava ny trano, ka napetraka eny amin’ny La voirie aloha izy ireo. Ahiana mantsy ny hirodanan’ny ampahan’ny rindrim-bato sisa, ka mety hitera-doza. Vehivavy iray 34 taona no maty voatototry ny tany sy ny vato tao ny alatsinainy maraina teo, rehefa nianjera ny tapany amin’io rindrim-bato io.
Nandray andraikitra avy hatrany ny ben’ny tanàna, nanao fanadihadiana mikasika io rindrim-bato io, ka fantatra tamin’izany fa fanomezan-dalana hanorina fefy no nomen’ny kaominina ny orinasa SOECO ny taona 2014 teo. Nataon’izy ireo fefy ny tapany ambony saingy nasiany rindrim-bato manohana mbola nototofana tany ihany koa ny tapany ambany. Araka ny nambaran’ny teknisianina ao amin’ny La voirie anefa dia tsy manaraka ny fenitra io fefy rindrim-bato io fa manify nefa avo dia avo. Araka izany dia nandray anjara miantoka ny sakafo sy fampiantranoana ireo fianakaviana voatery nafindra toerana ny tompon’ny tany nihotsaka.
Ny kaominina kosa dia handrodana ilay rindrim-bato sy hanadio. Rehefa vita izany dia averina aorina ny tranon’ireo fianakaviana sivy tafo ireo, izay misy efa ho 15 taona no nipetraka teo ka mbola ny orinasa Soeco daholo no hiantoka ny fandaniana rehetra.